That's so good, right?: Dropping The Soap (Part I)
Dropping The Soap (Part I)
ကျွန်တော် ရေကူးအားကစားကို အလွန်သဘောကျနှစ်သက်သူတစ်ယောက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအသက် ၁၈နှစ်ထက်ပိုများပိုနေ လားမသိ။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်နယ်နိမိတ်ထဲက ရေကူးကန်ကြီးမှာ တစ်ပါတ်ကိုအနည်းဆုံး သုံးကြိမ်လောက်တော့ကူးဖြစ်ပါတယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား အလန်းစား ရေကူးသမားကိုယ်ဟန်ပုံရိပ်ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ရယ် ရေထဲမှာ ရှိနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို ကြိုက်တာလည်း ပါတာပေါ့။ ရေကူးတဲ့အရှိန်အပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပေမဲ့ ရေထဲမှာဆို ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ခါနေတတ်ပါတယ် အဲ…. Speedo ဘောင်းဘီအကောင်းစားကိုတော့ဝတ်ရတာပေါ့ဗျာ။ Speedo ကိုဝတ်ဆင်ရတာက ၀တ်ရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိတာ တစ်ခုထဲကြောင့်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးစပ်ကခြုံဖုတ်ငယ်လေး မပြုတပြုပေါ်နေတတ်ပြီး ခပ်ဖောင်းဖောင်းခေါင်းအုံးတစ်ခုထည့်ထားသလို ဖောင်းကြွနေတတ်တဲ့အမြင်ကို ငမ်းကြောထချင်သူများအတွက် စေတနာပိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာ…နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာဆိုင်တွေမှာ ဆံပင်သွားမညှပ်ဘဲ ထောင်ဂဏန်းဝန်းကျင်သာပေးရတဲ့ ဆံသဆိုင်တွေမှာညှပ်ပြီး ပိုက်ဆံစုတတ်ပါရဲ့ အဟဲ…၀တ်စုံလေးတွေကိုဝယ်ဖို့ အတွက်ကတော့ နည်းလမ်းရှာရတာပေါ့ အပိုဝင်ငွေရှာမှမရှာနိုင်သေးတာကိုး။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုချမ်း FB မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်တုန်းက ပို့စ်တစ်ခု Tag တယ်ဗျ။ အလန်းစား ၀တ်စုံတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေပေါ့ဗျာ။ သူကဘောစိသားဆိုတော့ သူဝယ်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံတွေကို အ၀တ်ဘီရိုထဲဘယ်လိုထည့်ထားတယ်ဆိုတာ ပြချင်တာလည်းပါ သလို သတင်းပေးချင်တာလည်းပါမှာပါ။ မပြချင်ပြချင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလည်းမြင်လိုက်ရသေးတယ် ကြောင်ရုပ်လေးပါတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံ တစ်စုံရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလေ။ အခုခေတ်လူငယ်အတော်များများက အားကစားကို ၀ါသနာပါပါကစားကြတယ်ဆိုတာရှားပါတယ်။ ရှားပါးတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကိုချမ်းပါတယ်။ သူ Speedo ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ရေကူးကန်နံဘေးကိုလျှောက်လာတဲ့အချိန်ဆို အရမ်းသိသာတယ် ဟိုသည်ကနေ မသိမသာ ကြည့်နေကြတာ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ပေါ့။ ခြောက်လအတွင်း ရေကူးကြတဲ့အကြိမ်အတော်များများထဲ မှ သုံးကြိမ်လောက်က သိသာသလိုပါပဲ သူဝတ်တဲ့ဘောင်းဘီအရောင်က မိုးပြာနုအရောင်လေးဖြစ်နေတာကြောင့်လား ရေစိုကြောင့် ဖောက်ထွင်းမြင်လုမတတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်လားမသိ။
ကျွန်တော့်အတွက် အတွေးစိတ်ကူးတစ်ခုလို့လည်း ထင်ကောင်းထင်ရမည့် အမြင် အတွေ့တွေကိုပြောပြမယ်ဗျ။ ဂေး အပုန်းတွေလို့ ပြောနိုင်တဲ့လူအတော်များများဟာ Speedo ၀တ်ထားတဲ့သူ့အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ တရစ်ဝဲ၀ဲရှိနေတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် အ၀တ်လဲခန်းထဲ သူဝင်သွားပြီဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ အကြည့်တွေမျက်လုံးတွေက တန်းနေတာပဲ မမှားဘူး။ သူအ၀တ်လဲလှယ်နေချိန် ဆိုရင် သူတို့တွေ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာရောက်နေတတ်ကြတယ်။ ဒီလို ဒီလိုတွေကြောင့်လားတော့မသိ ကျွန်တော် အ၀တ်လဲခန်းကိုမုန်းတယ် သဘောမကျဘူးဗျာ။ ရေကူးကန်ဘက်ကိုရောက်ဖို့အရင်ဆုံး အ၀တ်လဲခန်းတွေကိုဖြတ်သန်းပြီးမှ ရောက်ရတာဆိုတော့ ရေကူးလာသူ ကျားကျားမမ သက်ဆိုင်ရာ အ၀တ်လဲခန်းကိုယ်စီကို ၀င်ကြရတာများပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ၀တ်လစ်စလစ် ငနဲတွေနဲ့တိုးတဲ့အချိန်ဆိုရင် ပေါင်ကြားက ညီဘွားက အလိုက်မသိခေါင်းထောင်ထတတ်သေးတာ ဒုက္ခ။
ဟိုသည်မျက်စိအရသာခံကြည့်လေ အားကစားဘောင်းဘီတိုအောက်က ရေကူးဘောင်းဘီကပိုမိုဖောင်းကြွလေဆိုတော့ တစ်ခါတလေ ရေကူးကန်ထဲကအပေါ်ကိုတက်ဖို့ ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ အဲ….ဒီရေကူးကန်က အမိုးဖွင့် အကာအရံမရှိသောကန်မျိုးဆိုတော့ လူတစ်ယောက် တစ်ခုခုထင်ရှားနေရင်သိသာမြင်သာပါရဲ့။ တစ်ခါတလေ ခပ်ရွတ်ရွတ်နဲ့ ပေါင်ကြားကငနဲခေါင်းထောင်ထတဲ့အခြေနဲ့ကို အ၀တ်လဲခန်းစီကို ကျွန်တော်ထသွားရတတ်ပါတယ်။ စိတ်မ၀င်စားတတ်တဲ့ ကလေးတွေရှေ့ဆိုရင် သူတို့ကဂရုမစိုက်တော့ အေးဆေး ပေါ့။ တစ်စုံတစ်ယောက် အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ အချိန်တော်တော်ကြာငြိမ်ပြီး တိတ်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် သူအ၀တ်လဲတာကို မသိမသာ ချောင်းမြောင်းကြည့်မိတယ်။ ရေကူးတဲ့အချိန် ရေကူးကန်ကိုသွားတဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်း ကျွန်တော်နဲ့ ကိုချမ်းအတူတကွလို လိုသွားတယ် ကျွန်တော်တို့ရေကူးကြတယ် တဘက်ကိုယ်စီခါးမှာပတ်လို့ အ၀တ်လဲခန်းစီကိုပြန်လာကြတယ် ရေစိုဝတ်တွေ ဘောင်းဘီ တိုတွေ တစ်ခါတရံအပေါ်ဝတ် စွပ်ကျယ်တွေအကုန် ချွတ်ချပစ်ကာ ခပ်မြန်မြန် ကျွန်တော်အ၀တ်လဲလှယ်မိတတ်ပါရော များသော အားဖြင့်။
ပထမတော့ ကိုချမ်းအကြည့်တွေက ကျွန်တော်ပြုမူလှုပ်ရှားနေတဲ့အပေါ် ဒီကောင်ဘာလဲဟဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ သူလည်း ကျွန်တော့်လို ပြုမူလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းအိပ်စက်ရတဲ့ညတွေတိုင်း သူ့ပေါင်ကြားကခပ်ဖောင်းဖောင်း အထုပ်အထည်ကြီးအကြောင်း ကျွန်တော်တွေးရတာအမော။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ် သူ့ငပဲကြီးက ၇လက်မလောက်များထွားသလား၊ လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လို့လက်ချောင်းတွေကြား ဆန့်ပါ့မလားတွေးမိတယ်။ လျှို့ဝှက်စွာ ကျွန်တော်ဝယ်ယူအသုံးပြုထားတဲ့ dildo အစား သူ့ငပဲကြီးများ ကျွန်တော့်ခရေထဲမြှုပ်လိုက်ရရင် အိုး….နုညံ့လှတဲ့ သူ့လက်အစုံက ကျွန်တော့်ငပဲနဲ့ရွှေဥတွေကို အသာပွတ်သပ်ပေးရင် အား…ကြက်သီးထစဖွယ်ပဲ။
ကိုချမ်းက ကျွန်တော့်ထက်အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးပါတယ်။ အသက်တစ်နှစ်ပိုသလိုအနေအထားကလည်း တစ်ဆင့်မြင့်ပါရော။ ကျွန်တော့် ဇာတိမြို့ကလေးရဲ့ ကောလိပ်တစ်ခုမှာ လတ်တလောတက်နေသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပြောပြဖို့ မေ့တောင်မေ့နေသလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခန့်မသင့် ညစ်ပေသွားရမှုတစ်ခုအပေါ် မူတည်ပြီး သူ့တိုက်ခန်း မှာ ရေလိုက်ချိုးရတာလေးက အစကတော့ရိုးရိုးသားသားပါလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရေလိုက်ချိုးတယ် ပြီးတော့ ရုပ်ရှင် တစ်ကားလောက် အတူထိုင်ကြည့်ကြတယ် နောက် Video games အချို့ထိုင်ကစားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ နောက်ပိုင်း မကြာခဏဆိုသလို ဘယ်ကိုပဲအတူတူ သွားဖြစ်ကြသည်ဖြစ်စေ သူ့တိုက်ခန်းက ရေနွေးနွေးနဲ့ ရေအတူချိုးဖြစ်ကြပြီးမှ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းသော သူ့တိုက်ခန်းလေးကြောင့်ရယ် သူ့ရေပူစက်လေးရဲ့ အနေတော်ချိန်ညှိထားမှုကြောင့် ရေချိုးရတာသာယာမှုကြောင့်ရယ် အကြောင်းပြ ချက်အချို့ကြောင့် သူ့အပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုက ရေကူးကန်အ၀တ်လဲခန်းထဲဝယ် ကျွန်တော့်ဘေးနံဘေး ၀စ်လစ်စလစ်ငနဲတွေလမ်းသ လားနေလို့ခံစားရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ သိပ်မပြောပလောက်ပါဘူး။ ဟာသသဘောလို့ပြောရမလား ဟာသဆန်ဆန်လို့ပြောရ မလား သူ့တိုက်ခန်းက ရေချိုးခန်းထဲအတူတူရေချိုးဖြစ်တော့ ဟိုသည်စနောက်ကြရင်း သူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ခိုးလို့ခုလုဖြစ်ကာ တစ်မျိုးတစ်မည် စဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ သူ့ကိုအဲ့သလောက်မစိုက်ကြည့်ပါနဲ့ သူက ‘No Homo’လို့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောခဲ့တာပါ။
ကျွန်တေ်ာတို့နှစ်ယောက် အမြဲတစေ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ ဟာသလေးတွေနှောစကားဟိုသည်ပြောကာ သူ့တိုက်ခန်းရှိရာကို လမ်းလျှောက်ပြန်ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတလေ အခုနေများ မိုးသည်းသည်းမည်းမည်းရွာချလိုက်လို့ သူ့အ၀တ်တွေရွှဲရွှဲစိုကုန်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိပါရော။ ၀တ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကို ခပ်သွက်သွက်ချွတ်ပြီး ရေအတူချိုးနိုင်မှာမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ လမ်းလျှောက်လို့ သူ့တိုက်ခန်းရှိရာကိုရောက်တော့ တံခါးဝမှ ခဏရပ်ကာ လွယ်လာတဲ့ ကျောပိုးအိတ်တွေကိုချရင်း အတွင်းမ၀င်သေးဘဲ ဟိုသည်ငေးကြည့်လိုက်ကြသေးတယ်။ ပြီးမှ အခန်းတံခါးဖွင့်ဝင်ခဲ့ကြကာ ကျောပိုးအိတ် ဖိနပ် အပေါ်ဝတ်စုံတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူထားပြီး စာကြည့်ခန်းထဲက ရည်ညွှန်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကျွန်တော်လိုက်ငှားလိုက်ရော။ နားပြုပြီးနောက်မှာတော့ ရေချိုး ခန်းထဲအတူဝင်ခဲ့ကြပါရဲ့ ရေချိုးရာမှာတော့ စည်းကမ်းဥပဒေတွေ မရှိလိုက်ပါဘူးနော် အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စ။
နှစ်ယောက်သား ရေပန်းအောက်ကို ခိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အပူချိန် ခပ်မြင့်မြင့်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို သန့်စင်သွားစေသလို ခံစားကြရသလိုပါ။ အဦးဆုံးတော့ သူ့ကျောပြင်တလျှောက်ကို ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့် ညင်ညင်သာသာ ကျွန်တော်တိုက်ပေးမိပြီး နေရာ အနှံ့ပွတ်တိုက်ပေးပြီးနောက် သူပြန်တိုက်ပေးလို့ရအောင် ကိုချမ်းဘက်ကိုကျောပေးပြီး ကျွန်တော်နေပေးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ အဲ….ဆပ်ပြာတုံးကို သူ့လက်ထဲလှမ်းအထည့် ချောပြီး ရှေ့တည့်တည့်ပြုတ်ကျသွားရောဆိုတော့ ဘာရယ်ညာရယ်မစဉ်းစားအား ကုန်းပြီး ကောက်လိုက်တာပေါ့။ ရေချိုးခန်းထဲ လူနှစ်ယောက်အတူရေချိုးစဉ် ဆပ်ပြာတုံးပြုတ်ကျပြတာက ဘာ - ထောင်ထဲမှာဆိုရင်လည်း အဲ့လို ဆပ်ပြာတုံးပြုတ်ကျ ကုန်းကောက်ပြတာက ဘယ်ဒင်းဆိုတာတွေကြားဖူးခဲ့တယ်လေ။ ဆပ်ပြာတုန်းကို ကုန်းကောက်လိုက်တာဆိုတော့ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုက ဟသွားပြီး တင်အကွဲကြောင်းလေးကို သူ့ရှေ့နည်းနည်းပြသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ပြန်ကုန်းအထ သူ့ပေါင်ခွဆုံ ကို မျက်စိကစားလိုက်တော့ ပျော့နေတဲ့သူ့ငပဲဟာ Speedo ထဲမှာ ဟိုသည်နေရာရွေ့တာကိုမြင်ရရော။ အဲ့မြင်ကွင်းက ကျွန်တော့်ငပဲကို အသားကုန်မာတောင့်လာစေတယ် ဆိုရပါမယ်။ ဟန်မဆောင် မအောင့်နိုင်သလိုပဲ သူနဲ့ဆို။
အိုး….ဘယ်လိုမှ မလှုပ်ရှား အေးခဲနေတဲ့အတိုင်းရပ်နေမိပါတယ် ကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်နေတာကို သူအတိုင်းသားမြင်နေရတဲ့အတိုင်းလေ။ သူစိုက်ကြည့်နေတာနဲ့တင် ကျွန်တော့်ငပဲဟာပူနွေးပြီးသူ့လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လာတဲ့ဖီလင်မျိုးခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ခေါ်သံ ကြားလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့ စိတ်ကူးထဲမျောနေရာကနေ သတိပြန်ကပ်လာကာ ဆပ်ပြာတုန်းကို သူ့လက်ကမ်းလိုက်ရော အလိုလို။ ရူးနှမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိနေသလိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျောမလုံသလိုခံစားရတယ်ဗျ ကျွန်တော့်ငပဲကသိသိသာသာကို ဘောင်းဘီထဲက နေ တိုးထွက်နေတာကိုး။ စိတ်ကူးယဉ်တာက စိတ်ကူးယဉ်တာပဲလေ ကိုယ်ငမ်းနေတဲ့ငနဲရှေ့မှာ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်ဘဲ စိတ်ကထလာ တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေမိတယ်။ ပေါင်ခွဆုံက ငပဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဘောင်းဘီထဲပြန်ကပ်သွားမယ်လို့ စိတ်လျော့ကြည့်ပေမဲ့ မဖြစ်လာဘူးဗျာ။
ကိုချမ်းလေ ကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်နေတာကို သတိထားမိပြီး ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးပြင်တလျောက် ရဲရဲနီသွားရပြီး သူ့ကိုတောင်းပန်စကားဆိုရတာပေါ့ တစ်နေ့လုံး စိတ်ထန်နေလို့ပါဆိုပြီးတော့။ သူက ယောက်ျားအချင်းချင်းပဲကွာတဲ့ စိတ်ထပြီး ထောင်နေတာအတွက်ကတော့ အေးဆေးပါတဲ့။ ကျွန်တော့်အနီးနားတိုးကပ်လာပြီးနောက် တင်သားဆိုင်နားက Speedo ဘောင်းဘီအစွန်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲကိုင်ကာ အောက်ကိုဆွဲချပစ်လိုက်တာ ပေါင်ခွဆုံက ငပဲကြီးက ငေါက်ကနေပေါ်လာသလို ရွှေဥတွေကလည်း တွဲလျောင်းအကုန်ပေါ်ထွက်လာရော။ အတင်းကုန်းရုန်းထနေတဲ့ဟာကြီးကို အတားအဆီးသဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီ မရှိပြန်တော့ သူ့ရှေ့မှာနေရတာတစ်မျိုးကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိနေတဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဒီထက်ပိုပြီးဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
နောက်တော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံကိုကုန်းပြီးဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ခါးကိုကုန်းပြီးချွတ်တာမှာ သူ့ဦးခေါင်းဟာ ရေမှုန်ရေမွှားအောက်မှာပဲ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံနား ဝေ့၀ဲနေလေရဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ သူပြုလုပ်နေတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအယာများကြောင့် ရှော့ခ်ဖြစ်နေ ရတယ်ဗျ။ ထွားလှတဲ့သူ့ငပဲကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရှင်းကနဲမြင်နေရတာလေ။ ကျွန်တော်စိတ်ကူးအိပ်မက်ခဲ့ရသလို ငပဲဆိုဒ်ကမဟုတ်ပေ မယ့် ကြပ်နေတဲ့ဘောင်းဘီဘေးတစ်ခြမ်းမှာ သူ့ငပဲက အသာလှဲလျောင်းနေသေးတာပါ။ ပြီးမှ တန်းကနဲထွက်လာတဲ့ သူ့ငပဲထိပ်အရေ ပြားက ဖြတ်မထားဘဲ ရေစက်တွေနဲ့တွဲလဲခိုနေတာက နို့သီးခေါင်းလေးတွေ နောက်တခါ သူ့လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်ခိုသီးနေတဲ့ရေစက်များ လိုပါပဲ။ သူ့ဆီးခုံမွှေးတွေက အနက်ရောင်တောက်မနေဘဲ အညိုရောင်ဆံနွယ်ခွေတွေလိုပဲ ခပ်စုစုနဲ့ ခြုံပုတ်အသေးစားလေးသဖွယ်ပါ။ မွှေးညှင်းနုတွေကတော့ ဆီးခုံကနေ ရင်ညွန့်အထိ တိမ်းမူးစဖွယ် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ တင်ပါးတ၀ိုက်နဲ့ ခါးစပ်တလျောက်မှာတော့ Speedos ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးရာကထင်းနေရော။ ကျွန်တော့်ငပဲလည်း ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာ ရှေ့သို့တန်းကနဲဖြစ်သွားတာကို သိသိ သာသာ ခံစားမိရပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုချမ်းကို အရှက်သည်းစွာ ပြန်မော့ကြည့်မိပါတယ်။ သူသည်လည်း အ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေက တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုမိသွားဟန်တူရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ကိုတောင်းပန်စကားဆိုမိတာပေါ့ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင် ၀ယ် အ၀တ်မပါဘဲ ဒီလိုနေကျင့်မရှိခဲ့ဘူးတာကြောင့် တစ်မျိုးဖြစ်သွားရတာပါပေါ့။ အတွေးပါပဲလေ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ငပဲကို မြင်တာဟာ အထူးတဆန်းမဖြစ်လောက်ပါဘူး ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းမဟုတ်လား။ သူကပြောပါတယ် ရပါတယ် ဂရုတောင်မစိုက်မိ ပါဘူးတဲ့။ ဒီနှစ်နွေဦးမှာ ကျွန်တော် ကျောင်းကအဆောင်မှာသွားနေဖို့ စီစဉ်ထားတာဆိုတော့ အခုကတည်းက ကျင့်သားရပြီးသားဖြစ် တာပေါ့ ဟိုမှာက ရေချိုးခန်းထဲ အ၀တ်မပါတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရေချိုးတာကိုမြင်ရတာ ပုံမှန်လိုတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိုယ်မသိတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကို အလေးထားနေလို့လည်း အလုပ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဘဲလေ။ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးနဲ့ စမြင်ရတာဆိုတော့လည်း မဆိုးပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်း ခြေချင်းဝတ်မှာ တန်းလန်းဖြစ်နေသော ဘောင်းဘီကို အကုန်ကျွတ်အောင် ကုန်းချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အမှတ် မထင် သူ့ပေါင်ခွဆုံကို ရှိုးလိုက်တာမှာ ဆပ်ပြာမြုပ်တွေကြား လှုပ်ရှားသွားတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကိုချမ်းရဲ့ပျော့အိနေတဲ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲ မာတောင့်ပြီးလာထောက်ပြန်ရော။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မတော်တဆဖြစ်ရပ်မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ သူ့ရဲ့သွေးတိုးစမ်းမှုအပေါ် ကျွန်တော် ငြင်းဆန်နိုင်အားမရှိ စကားလည်းမဆိုဘဲ ခဏငြိမ်လိုက်မိတယ်။ ပြီးမှ သက်ပြင်းချရင်း ခါးကိုမတ် လိုက်ပါတယ်။ အ၀တ်တွေကို ကောက်ပြီး အခန်းထောင့်က အ၀တ်လျှော်စက်ထဲသွားထည့်လိုက်ကာ သူ့ကိုစကားပြန်ဖို့ကြံရွယ်လိုက် တယ်ဗျ။ ဟုတ်တယ်လေ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ပေါင်ကြားကအမြှောက်ကြီးတရမ်းရမ်းဖြစ်တာမဟုတ် သူသည်လည်း မိုးပေါ်ထောင်နေပြီမဟုတ်လား။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို တမင်ကိုင်တွယ်တာမျိုးမဟုတ်သလိုလိုနဲ့ဆွဲကိုင်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခပ်ဖွဖွ အပေါ်အောက်ပွတ်သပ်ပေးမိရော။ သူက သဘောတကျရယ်မောလိုက်က ဆက်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ တော်ကြာ ပြီးသွားလို့ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ် ဆိုပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကတော့ အဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့လို့တွေးမိတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်နေတာကို မရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော်လက်ထဲ တဖြည်းဖြည်း ထွားလာတာများ လက်မနဲ့လက်ညိုးထိ အောင် မနည်းဆုပ်ကိုင်ထားရတာများ မကောင်းဆိုးရွားတစ်ကောင်လိုပါပဲ။ သူ့ငပဲထိပ်အရေပျားလေးကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပြီး အသာပွတ်သပ်ကာ ငပဲခေါင်းပေါ်လာအောင်လုပ်လိုက် ဆွဲဖုံးလိုက် အဆက်မပြတ် ပွတ်သပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုချမ်းကလည်း ကျွန်တော့်ငပဲကို ပြန်လည်ဆွဲကိုင်ကာ အားကျမခံပြန်လည်ပွတ်သပ်တယ်ဗျ အဲ့ဒါမှ fair ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့။ အားရအောင်တော့ သေချာလေးအချိန်ကြာကြာ မကိုင်လိုက်ရပါဘူး သူ့ငပဲသွေးကြောတွေဖောင်းကြွလာပြီး ခဏမှာတော့ ပြစ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ သုက်ရည်တွေပန်းထွက်လာတာများ သူ့ငပဲ လိင်တံတလျောက်ကနေ စီးကျကုန်တာ ရွှေဥတွေကနေ တွဲလွဲကျကုန်တဲ့အထိပါဗျ။ သူ့ငပဲထိပ်က သုက်ရည်ထွက်တာ ပန်းတာ ရပ်သွားပြီလို့ ခံစားမိပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ထိန်းထားသမျှကိုလည်း လွှတ်ချပစ်လိုက်တာ သူ့ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ်မှာ ဖွေးကနဲ ဖြစ်ကုန်ပါရော။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား သဘောတကျရယ်မောခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေပွနေတဲ့ သူ့ဆီးစပ်ကအမွှေးတွေကို ဆေးကြောပေးလိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က သုက်ရည်တွေကို ဆေးကြောလိုက်ပါတယ်။ သူက သူ့ဖာသာ လက်ကစားတာအပြင် အခု အခြားသူက လုပ်ပေးတာကိုခံစားရတာ ပထမဆုံးပါပဲလို့ပြောသား။ နှစ်ဦးသား ရေကောင်းကောင်းချိုး ကိုယ်လုံးတွေကိုခြောက် အောင်သုတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ငပဲတွေက အိပ်မောကျနေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်နှင့် ကိုချမ်း ဗီဒီယိုဂိမ်းကို တစ်နာရီလောက် ကစားဖြစ်ကြတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော် ညသိပ်မနက်ခင် ဂိမ်းကစားတာကို အပြတ်ဖြတ်ပြီး အိမ်ပြန်ရပါတယ် ကားမစီး ခြေကျင်အပြေးလေးသွားရမှာကိုး။
သူ့အိမ်ကထွက်လာပြီးနောက် Sex shop တစ်ခုကို တန်းသွားမိခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ကို……
Alex Aung (31 July 2015)
Posted by Alex Aung at 8:08 PM
Good writing style with excellent story.
Awaiting for next episode.
minoo yein said...
အမျိုးသမီးချင်း လိင်တူဆက်ဆံခြင်း နောက်ကွယ်မှအန္တရာယ...